Etu ị ga -esi mara onye na -akọrọ m na Instagram | Androidsis
Instagram bụ otu n'ime netwọkụ mmekọrịta ama ama n'ụwa, yana ọtụtụ nde ndị ọrụ. Netwọk mmekọrịta nwere usoro iwu na ọnọdụ nke anyị ga -emerịrị iji debe akaụntụ anyị. Ọmụmaatụ nke a bụ na ịnweghị ike bulite foto gba ọtọ ma ọ bụ ọdịnaya ime ihe ike na ịkpọasị, dịka ọmụmaatụ. Ọ nwere ike bụrụ na egbochila akaụntụ gị yana nke a bụ n'ihi na mmadụ kọọrọ gị na netwọkụ mmekọrịta.
Ihe ọtụtụ ndị ọrụ chọrọ ịma bụ onye na -akọ m na Instagram. Nke ahụ bụ, onye bụ onye mere mkpesa na netwọkụ mmekọrịta, nke kwụsịrị site na igbochi ma ọ bụ kwụsịtụ akaụntụ anyị. Enwere oge mgbe ụdị mkpọchi a nwere ike bụrụ nke ezighi ezi, nke bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ na -ebute oke iwe maka ndị ọrụ na -ata ahụhụ na ya.
Iwu ojiji na netwọkụ mmekọrịta doro anyaNa mgbakwunye, ha siri ezigbo ike na nke a gbasara ihe enwere ike ebipụta na enweghị ike ebipụta. Ya mere, a na -atụ anya ka ndị ọrụ na -eso iwu ndị a oge niile. Ịghara ịkwanyere ha ùgwù bụ ihe nwere ike ịkwụ nnukwu ụgwọ, na -akwụsịtụ akaụntụ nwa oge ma ọ bụ n'ọnọdụ ụfọdụ mmachibido iwu na -adịgide adịgide. Ihe a na -emekarị bụ na mmadụ kọọrọ anyị, ka netwọkụ mmekọrịta wee mee ihe megide akaụntụ anyị.
Enwere ọtụtụ nhọrọ anyị nwere ike iji chọpụta onye kọọrọ m na Instagram. Ha abụghị usoro ga -arụ ọrụ oge niile, mana a na -egosi ha dị ka ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchọpụta maka nke a wee nwee mkparịta ụka gbasara ya, ka anyị mụta ihe na ọnọdụ a, dịka ọmụmaatụ.
1 Nkwụsịtụ akaụntụ
2 Chọpụta onye na -akọ m na Instagram
3 Gwa onye ọrụ kọọrọ gị (ọ bụrụ na ọ ga -ekwe omume)
Ihe nwere ike bụrụ na ọtụtụ ndị ọrụ na soshal midia tara ahụhụ oge ụfọdụ ọ bụ nkwụsịtụ nwa oge ma ọ bụ igbochi akaụntụ ahụ. N'otu oge, anyị na -ahụ onwe anyị na ọnọdụ a gwara anyị na a kwụsịtụrụ akaụntụ Instagram anyị nwa oge, n'ihi na enweela akụkọ banyere akaụntụ n'ozuzu ya ma ọ bụ n'akwụkwọ ebugoro na ya, nke a na -atụle ya ịbụ ihe megidere iwu nke netwọkụ mmekọrịta na ọdịnaya nke nabatara na ya.
Instagram ga -agwa gị ihe kpatara eji kwụsị ya akaụntụ gị mgbe niile. Nke ahụ bụ, ha ga -agwa gị ma ọ bụrụ na ịmeela omume a na -ewere na ọ dịghị mma, ma ọ bụrụ na dịka ọmụmaatụ ị na -akparị mmadụ site na ozi ma ọ bụ na nkwupụta ma ọ bụ ọ bụrụ na mbipụta ndị ebugoro na akaụntụ gị megidere iwu nke ikpo okwu. Ma ọ bụ akwụkwọ niile ị bulitere (enwere ike kọọ akụkọ niile) ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ naanị mbipụta.
Na mgbakwunye na ịgwa gị ihe kpatara ma ọ bụ ihe kpatara eji kwụsịtụrụ akaụntụ gị nwa oge, A na -agwakarị gị ihe ị ga -emerịrị iji nwee ike weghachite ya, ka akaụntụ gị wee na -arụkwa ọrụ ọzọ. N'ọnọdụ ndị ahụ ebe ọ bụ nkwusioru n'ihi na ibugola ụfọdụ posts megidere iwu (foto ịgba ọtọ ma ọ bụ ụfọdụ ihe gbasara mmekọahụ, dịka ọmụmaatụ), mgbe ahụ naanị ị ga -ehichapụ foto ndị ahụ ị bulitere, ka akaụntụ gị dị ọzọ. Ọ bụrụ n'ịgbaso ntuziaka ndị ahụ, ị ​​gaghị enwe nsogbu ọ bụla. Ọ bụrụ n'ịchọrọ, ị nwere ike ị na -eme mkpesa na netwọkụ mmekọrịta na nkwụsị a ezighi ezi.
Chọpụta onye na -akọ m na Instagram
Ozi na netwọkụ mmekọrịta adịghị enye bụ aha onye ma ọ bụ mmadụ ndị kwupụtara akaụntụ ma ọ bụ akwụkwọ anyị, nke butere nkwụsị a. Yabụ na anyị enweghị ike ịma onye na -akọrọ m na Instagram. Agbanyeghị na enwere akụkụ dị iche iche anyị nwere ike iburu n'uche, nke nwere ike inye anyị echiche ịmata onye onye ahụ kọọrọ akaụntụ anyị nwere ike ịbụ, maka ihe kpatara ya. Agbanyeghị na anyị agaghị enwe ike mara nke ọma onye bụ onye kọọrọ profaịlụ anyị na netwọkụ mmekọrịta.
Ozi nkeonwe: Ọ nwere ike bụrụ na anyị na mmadụ gbanwere ozi na mkparịta ụka ahụ anaghị aga nke ọma, na nsonaazụ onye ahụ katọrọ anyị na ọ ga -egbochikwa anyị. Ọ bụrụ na ị nwela nkata na -adịghị mma ma ọ bụ ebe mmadụ mere mkpesa maka akaụntụ gị ma ọ bụ ọdịnaya ị bulite na ya, ọ nwere ike bụrụ na onye ahụ agaala n'ihu wee kọọ akaụntụ gị n'elu ikpo okwu. Ọ ga -ekwe omume na mmadụ gwara anyị ozugbo na ozi na ha ga -akọrọ anyị na netwọk mmekọrịta, yabụ na ọ nwere ike bụrụ onye ahụ.
comments: Ọzọkwa na nkọwa dị n'akwụkwọ anyị anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na ọ nwere ihe na -arụtụ aka onye katọrọ ma ọ bụ kọọrọ anyị. Ị nwere ike ibugo ozi ndị na -ekwesịghị ekwesị, na -emegide iwu ma ọ bụ na -akpasu ụfọdụ iwe iwe na enwere ndị kwuru okwu na ya, ndị na -arịọdị gị ka ị wepu ọkwa ndị ahụ, mana i mebeghị. Ọ nwere ike bụrụ na ọ bụ otu n'ime ndị ahụ mechara kọọrọ gị na ọbụna kwuo na ha ga -eme nke a.
Ndị na-eso ụzọ: Enwere ike ịnwe akaụntụ ụfọdụ ị maara na akwụsịla iso gị na Instagram na mberede na nke a mere kpọmkwem n'oge ma ọ bụ ụbọchị mgbe akọpụtara ma kọọ akaụntụ gị. Ọ bụrụ na ị chọpụtala na onye ị maara kwụsịrị iso gị na mberede, ị nwere ike ịnọ na -eche ma ọ bụ nke a bụ ihe kpatara mkpesa a na nkwusioru profaịlụ gị.
Mechiri: Ọnọdụ yiri ya bụ na enwere mmadụ ma ọ bụ akaụntụ ị maara, onye ị na -eso ma ha na -eso gị, onye gbochiri gị na mberede. Ma enwere ihe kpatara (dị ka mkparịta ụka ọ bụla) ma ọ bụ na ọ bụghị, ị nwere ike jụọ onwe gị ma onye a ọ nwere ike bụrụ onye kọọrọ gị akaụntụ gị na netwọkụ mmekọrịta. Ọ bụrụ na ị ma ha, ị nwere ike ịjụ ha oge niile ma ọ bụ otu a ka ọ dị na ihe kpatara nke a ji mee.
Ndị a bụ ụfọdụ aghụghọ nwere ike inyere gị aka mgbe ị jụrụ onye kọọrọ m na Instagram. Maka ebumnuche nzuzo, netwọk mmekọrịta anaghị ekpughe onye bụ onye kọọrọ akaụntụ gị, ihe butere nkwụsịtụ nwa oge ma ọ bụ igbochi profaịlụ gị n'elu ikpo okwu. Nke a bụ ihe ezi uche dị na ya, yabụ na ọ bụghị ihe ga -agbanwe. Anyị agaghị ama nke a n'ezie, belụsọ ma onye mere ya agwa anyị ozugbo, dịka ọmụmaatụ, ihe nwere ike ime n'ọnọdụ ụfọdụ.
Ọzọkwa, n'ọtụtụ ọnọdụ ọ nwere ike ọ baghị uru inyocha onye na -akọrọ m na Instagram. Ọ bụrụ na anyị na -agbaso iwu omume nke edobere n'elu ikpo okwu, ọ nweghị ihe ga -echegbu anyị. Anyị nwere ike bulite akwụkwọ nke ọma ma soro ndị ọrụ ndị ọzọ na -emekọrịta ihe. Ọ bụrụ na n'ihi ihe ọ bụla, a kwụsịtụrụ akaụntụ ahụ, anyị nwere ike na -ekwu mgbe niile na ọ bụ ihe ezi uche na -adịghị na ya, n'ihi na anyị na -erube isi n'iwu oge niile. Yabụ na ọ bụghị ihe anyị ga-echegbu onwe anyị n'ọtụtụ ọnọdụ na netwọkụ mmekọrịta ama ama.
Gwa onye ọrụ kọọrọ gị (ọ bụrụ na ọ ga -ekwe omume)
Ọ bụrụ na ị na -enyo onye kọọrọ m na Instagram, ị nwere ike ịkpọtụrụ onye ọrụ a. Ọ nwere ike inye aka mgbe niile ka gị na onye ahụ nwee mkparịta ụka iji chọpụta ihe kpatara ha ji kọọ akụkọ anyị na netwọkụ mmekọrịta ama ama. Ebe ọ bụ na ọ nwere ike bụrụ ihe kpasuru ha iwe ma ọ bụ kpasuo ha iwe, mana na anyị amaghị na nke a bụ ikpe. Nghọtahie nwere ike bute mkpọchi akaụntụ ahụ.
Ịgbalị ịkọwa nsogbu bụ ihe dị mma, ọkachasị n'ihi na ọ nwere ike zere anyị nsogbu n'ọdịnihu. Agbanyeghị na ọ dị mkpa na anyị na -emeghe mkparịta ụka ahụ oge niile. Ọ bụrụ na mmadụ ma ọ bụ karịa na -akatọ anyị, otu anyị si akpa agwa ma ọ bụ ọdịnaya anyị na -ebugo na akaụntụ Instagram anyị, ọ dị mkpa ịdị njikere ịnabata nkatọ ndị ahụ. Anyị nwere ike ịhụ ma enwere eziokwu n'ime ha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa na anyị ga -agbanwe ụzọ anyị si egosi onwe anyị na netwọkụ mmekọrịta, dịka ọmụmaatụ, ka anyị nwee ike nwee nsogbu na -abịa n'ọdịnihu ma ha agaghị akọrọ anyị. .
O di nwute, nke a abụghị ihe anyị nwere ike ime mgbe niile. Dịka anyị kwuru na ngalaba nke gara aga, anyị nwere ike nwee enyo ụfọdụ n'ọnọdụ onye gbochiri anyị, mana belụsọ na onye mere ya gwara anyị, anyị amaghị n'ezie ma ọ bụrụ na ọ bụ onye kọọrọ m na Instagram na onye mere ka emechie profaịlụ ma ọ bụ kwụsịtụrụ. Yabụ na ọ gaghị ekwe omume mgbe niile inwe mkparịta ụka a, nke n'ọtụtụ ọnọdụ nwere ike bụrụ ezigbo enyemaka ịmụta ka ịghara ime otu ihe ahụ n'ọdịnihu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu ị ga -esi mara onye na -akọrọ m na Instagram
Egwuregwu cat kacha mma 5 maka gam akporo